चाणक्य बाट हामीले यी कुराहरु सिक्नै पर्ने - यथार्थ खबर
चाणक्य बाट हामीले यी कुराहरु सिक्नै पर्ने
Rojjan Raj Pandey १८ मंसिर २०७७, बिहिवार
आचार्य चाणक्यको अर्थशास्त्रले कल्याण, वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू, युद्ध रणनीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयहरूको सौदा गर्दछ। अर्कोतर्फ, 'नीती शास्त्र' लाई एफोरिज्मको संग्रह मानिन्छ जुन उनलाई विद्यमान शास्त्रोबाट संकलन गरिन्छ। उनको सल्लाहको साथ, मौर्य साम्राज्य, चन्द्रगुप्त मौर्यको शासन अन्तर्गत धेरै प्रगति भएको थियो। आचार्य चाणक्यको जीवन पाठ र चाणक्यको शिक्षालाई व्यवस्थापन अध्ययनको महत्वपूर्ण अंशको रूपमा पनि सिकाइन्छ जसलाई चाणक्य नीती पनि भनिन्छ।
यहाँ दिइएका केही जीवन पाठहरू:
१. शिक्षा सबै भन्दा राम्रो मित्र हो। एक शिक्षित मानिस जताततै सम्मानित छ। शिक्षाले सौन्दर्य र युवालाई पिट्छ।
स कथनबाट आचार्य चाणक्यले व्याख्या गरे कि एक व्यक्ति सामर्थ्यको हिसाबले कमजोर हुन सक्छ वा औसत वा कम देखिने देखिन्छ वा धेरै धनवान हुन सक्दैन तर ऊ अझै पनि ज्ञानी व्यक्तिको रूपमा व्यवहार गरी सबैबाट र सबै ठाउँबाट सम्मान पाउने छ। यदि ऊ राम्रो शिक्षित छ भने। एक धनी व्यक्ति आफ्नो धन गुमाउन सक्छ, समयको क्रममा सौन्दर्य हराउन सक्छ, सम्बन्ध र प्रेम फीका बाहिर तर शिक्षा र ज्ञान कुनै पनि अवस्थामा कुनै व्यक्ति छोडदैन। आचार्य चाणक्य नीतीले जीवनको सर्वश्रेष्ठ पाठहरू दिए जुन शिक्षा र ज्ञान मात्र बढाउन सकिन्छ र कुनै पनि अवस्थामा यो तपाईंबाट चोरी हुन सक्दैन।
२. अरूको गल्तीबाट जान्नुहोस्, तपाईं तिनीहरू सबैलाई आफैं बनाउन लामो समय सम्म बाँच्न सक्नुहुन्न।
आचार्य चाणक्य नीतीको यो भनाइले एक व्यक्ति लाई तपाइँको वातावरण र तपाईका वरपरका मानिसहरुबाट अवलोकन गर्न, अवलोकन गर्न र सिक्न हौसला प्रदान गर्दछ। यसको मतलव तपाईको आफ्नै गल्तीहरूबाट मात्र सिक्न आवश्यक छैन तर तपाईले अरूलाई अवलोकन गर्नुपर्दछ र ईश्वरवादी गल्तीहरूबाट पनि उनीहरूलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन र तपाईको जीवनमा अनावश्यक समस्याहरूबाट आफूलाई रोक्नु पर्दछ। तपाईको गोप्य कुरा कसैसँग पनि कहिले पनि साझेदारी नगर्नुहोस्। यो तपाईं नष्ट हुनेछ।
आचार्य चाणक्य नीतीको जीवनको महत्वपूर्ण पाठबाट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षा भनेको यो हो कि तपाईले कहिल्यै पनि आफ्नो रहस्य कसैलाई पनि उकास्नु हुँदैन किनकि तपाईलाई यो थाहा छ कि तपाईको बिरूद्ध तपाईले कसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उनले भने कि कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईले आफ्नो कमजोरी वा तपाईको सामर्थ्य कसैलाई पनि साझा गर्नु हुँदैन। ताकि कोहीले पनि तपाइँका कमजोरीहरूमाथि आक्रमण गर्न नपाओस् र कोही पनि तपाइँको सामर्थ्यलाई कुनै तरिकाले चलाउन सक्दैन।
तपाईंले केही काम सुरू गर्नु अघि, आफैलाई तीन प्रश्नहरू सोध्नुहोस् - म यो किन गरिरहेको छु, परिणाम के हुन सक्छ र म सफल हुनेछु। केवल जब तपाई गहिरो सोच्नुहुन्छ र यी प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्।
आचार्य चाणक्यले आफ्नो चाणक्य नीतीमा भने कि कुनै पनि काम सुरु गर्नु अघि वा कुनै योजना लागू गर्नु अघि वा कुनै योजना थाल्नु अघि तपाईले यी प्रश्नहरू जहिले पनि सबै सम्भावित पक्ष र विपत्तीसँग जानुपर्दछ ताकि तपाईको सफलता र असफलताको सम्भावनालाई परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ।
फूलहरूको सुगन्ध हावाको दिशामा मात्र फैलिन्छ। तर व्यक्तिको भलाई सबै दिशामा फैलिन्छ।
आचार्य चाणक्यले भने कि कुनै व्यक्ति संस्कृति वा समुदायमा फरक फरक भए पनि सधैं अरुप्रति राम्रो हुन्छ। उसले भन्यो कि एक व्यक्ति मर्नेछ तर उसको भलोइ सदा रहन्छ। उसका असल कार्यहरू मानिसहरूले युगहरू र युगहरूका लागि याद गर्दछन्।
मानिस केवल आफ्नो गतिविधिहरुबाट महान् हुन्छ, जन्मसँग यसको केहि गर्न हुँदैन।
आचार्य चाणक्यले बताए कि व्यक्ति आफ्नो जीवनमा उसले गर्ने काम र गतिविधिबाट व्यक्तिहरूको अगाडि महान बन्छ। जहाँसुकै ऊ जन्म, जुनसुकै समुदाय, जाति वा भाषा जस्तोसुकै हो जुन कसैको महानताको निर्णय गर्न सक्दैन। उसले आफ्नो जीवन शैली र समाज र मानवता तिरको आफ्नो गतिविधिबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ।नम्रता आत्म-नियन्त्रणको जड हो।
आचार्य चाणक्यले आफ्नो कथनमा भनेका छन कि जीवनमा सफल र खुशी व्यक्तिका लागि उत्तम जीवन पाठ तपाई जतिसक्दो नम्र हुनुपर्छ। तपाईंको नम्रताले तपाईंको शत्रुहरूलाई कहिलेकाहीं कमजोर तुल्याउन सक्छ र यसले तपाईंलाई सधैं आत्म-नियन्त्रणमा राख्छ र एकै समयमा तपाईंको आत्म-विश्वास बढाउँदछ। भगवान मूर्तिहरूमा उपस्थित हुनुहुन्न। तपाईका भावनाहरू तपाईका परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईको आत्मा तपाईको मन्दिर हो।
जब मानिसहरू भौतिकवादी मूर्तिहरूमा परमेश्वरको पूजा गर्न अन्धो हुन्छन् र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँछन्, आचार्य चाणक्यको बिभिन्न दृष्टिकोण थियो। उनको चाणक्य नीतीले भने कि भगवान मूर्ति वा मन्दिरमा अवस्थित हुनुहुन्न, परमेश्वर हामीभित्र हुनुहुन्छ। उनले भने कि परमेश्वर हाम्रो भित्री भावनाहरुका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हाम्रो आत्मा त्यस परमेश्वरको लागि मन्दिर हो। एक व्यक्तिले परमेश्वरको खोजीमा मन्दिरको पछाडि भाग्नुपर्दैन तर उसको आत्मालाई मन्दिर र उसको भावना र ईश्वरको रुपमा व्यवहार गर्छ।